Xa iiMall zaba ziiDatacenters ... | Martech Zone
Xa iiMall zaba ziiDatacenters…
NgeCawa, uJuni 29, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Izolo ibilusuku olukhulu e Indebe yeembotyi. U Patric wayeka ukusuka apho Noobie, UDoug Theis ovela AbaFundi abaSebenzayo kwaye kamva emini, uAdam ukusuka Umbhalo ngesicelo.
I-Lifeline Datacenters inebali elipholileyo, kwaye lihlekisayo, ibali kwindawo yabo entsha ye-Eastgate Mall. I-Indianapolis Business Journal yenze ibali kubo ukugqiba kwabo ukuthenga, kodwa ngoku iziko ngoku liyaphila. Ingumgcini wedatha ogcweleyo yonke intsimbi kunye nempempe, kwaye ndiyakholelwa ukuba kuphela kweNqanaba IV e-Indianapolis- kunye nelona likhulu embindini mpuma.
Ifoto esuka DeadMalls.com.
I-Eastgate Mall yakhiwa kwiminyaka ye-50 kwaye yakhula nge-70's. Ibiyi ngokusweleka ngokusemthethweni emva kweminyaka engama-50 yenkonzo. Eyakhelwe ekuphakameni kwe-Nuke yokwakha kunye ne-USSR, ezinye zeemall zinee-bunkers eziphantsi komhlaba ezazakhiwe ngeerhafu zerhafu ngelo xesha. Ke-apha unendawo eneetoni zemifanekiso eqingqiweyo, ukufikelela kwizithuthi, ukutya okuninzi kwamandla, umvelisi, ukupholisa, iindawo zokufihla iibhombu… kunye nendawo yokuthengisa.
Wenza ntoni ngevenkile engenanto?
Yakha isiseko sedatha kuyo, ewe! Andiqinisekanga ukuba ngubani obenombono wokuqala wale projekthi, kodwa iyakhazimla- kwaye iyamangalisa. Ngoku ukuba indawo enkulu yentengiso ihambile kwi-intanethi, kulungile kangakanani ukuba indawo yokuthengisa iguqulwe ibe yindawo yedatha? Yeyona irony iphambili kwincwadi yam! I-Eastgate inokuba ivale iingcango zokuhamba ngeenyawo kwiminyaka embalwa edlulileyo, kodwa inethuba lokuvuselwa kwenye yezona ndawo zithengisa kakhulu, 'iindawo ezinkulu' kwilizwe!
Ndiza kuzama ukuseta ixesha lokufumana ukhenketho noDoug kwiveki ezayo okanye njalo. Andikwazi ukulinda ukubona oko bakufezileyo!
tags: mpuma mpumaamaziko eenkcukacha zobomi
Elona qhinga lokuKhulisa iBhlog yakho
Jun 29, 2008 ngo-6:50 AM
Ikarma yodederhu lweevenkile kukuzalwa ngokutsha njengeziko ledatha… inengqiqo. Yile nto sinokuyibiza ngokuthi "i-e-budism"?
Jun 29, 2008 ngo-8:39 AM
Ndiyayithanda iNdebe yeBhontshisi kwaye ndithetha nawe Doug. Kufuneka siyenze rhoqo loo nto. Kwaye undibale xa ufumana ukhenketho (olunye) iziko ledatha elitsha likaDoug!
Jun 29, 2008 ngo-10:50 AM
Oko kuyamangalisa malunga nevenkile! Ndandingazi ukuba uDoug wayekwinto enje. Oko kuhle kakhulu!
Juni 29, 2008 ngo-5: 14 PM
Enkosi ngokuqatshelwa, Doug. Ndibe nexesha elimnandi ndincokola nawe noPatric kunye nabasebenzi beBean Cup izolo. Siza kufumana ukhenketho lwase-Eastgate lulungiselelwe nina.